मुख मैथुनद्वारा गरिने यौन क्रियाकलाप सहि हो वा गलत ? – Shalom Nepal
शालोम नेपाल – मुख मैथुन सम्बन्ध, जसलाई “cunnilingus” पनि भनिन्छ जब महिलाहरुमा प्रदर्शन गरिन्छ र “fellatio” जब पुरुषहरुमा गरिन्छ जुन कुरा बाइबलमा उल्लेख गरिएको छैन। मुख मैथुनको सम्बन्धमा सोधिएका दुई प्राथमिक प्रश्नहरू छन्: (१) “के विवाह गर्नु अघि मुख मैथुनद्वारा गरिने यौन क्रियाकलाप पाप हो त?” (२) “के वैवाहिक जीवन भित्र गरिने मुख मैथुनको क्रियाकलाप नि पाप हो?” यद्यपि बाइबलले कुनै पनि प्रश्नलाई विशेष रूपमा सम्बोधन गरेको छैन, त्यहाँ बाइबलीय सिद्धान्तहरू अवश्य छन्।
के विवाह अघि वा बाहिर गरिएको मुख मैथुनद्वारा गरिने यौन क्रियाकलाप पाप हो?
यो प्रश्न बढ्दो हुँदै गइरहेको छ किनकि युवा मानिसहरूलाई “मुख मैथुनद्वारा गरिने यौन क्रियाकलाप पाप होईन” भनेर भनिएको छ, र मुख मैथुनलाई एक सुरक्षित यौनको रूपमा बढाइएको छ यसमा (गर्भावस्थाको कुनै जोखिम छैन, यौनजन्य रोगहरूको कम जोखिम*) अनि यौन सम्बन्धको उत्तम विकल्प। यसबारे हामीलाई बाइबलले के भन्छ? एफिसी ५:३ ले यो घोषणा गर्दछ, “तर तिमीहरूका बीचमा व्याभिचार र सारा अशुद्दता अथवा लोभको नाउसमेत नलीइओस … किनकि यी परमेश्वरका पवित्र जनहरूका लागि अनुचित छन्।” “सारा अशुद्दता” को बाइबलीय परिभाषा भनेको “विवाह बाहिरको कुनै पनि यौन क्रियाकलाप को रूप” हो (१ कोरिन्थी ७:२)। हिब्रू १३:४ का अनुसार “विवाहको ओछ्यान नबिटुलिओस “शुद्ध र पवित्र होस्। त्यसैले पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल अनुसार, यौन क्रियाकलाप विवाहको लागी आरक्षित हुनु पर्छ। यदि त्यसो हो भने विवाह अघि वा बाहिर गरिएको मुख मैथुनद्वारा गरिने सम्पूर्ण यौन क्रियाकलाप पाप हो।
के वैवाहिक जीवन भित्र गरिने मुख मैथुन क्रियाकलाप नि पाप हो?
सायद धेरै जसो, इसाई विवाहित जोडीहरूले यो प्रश्न गरेका छन्। कुन कुराले गाह्रो पार्छ भन्ने तथ्य बाइबलमा कतै पनि पाइदैन, पतिपत्नीको बीचमा हुने यौन सम्बन्ध राख्न कुन कुरा अनुमति दिने वा नदिने भन्ने बारेमा कतै पनि बताइएको छैन, पक्कै पनि अर्को व्यक्तिको समावेश हुने जुनै यौन गतिविधि(आपसी समझदारीमा, दुई वा त्यो भन्दा बढि) वा त्यस संग अभिलाषामा समावेश अर्को व्यक्ति (अश्‍लील सामग्री)। यी दुई प्रतिबन्ध देखि बाहिर, “आपसी सहमति” को सिद्धान्त लागू देखिन्छ (१ कोरिन्थी ७:५)। जबकि यो पाठले विशेष रूपमा वैवाहिक यौन / सेक्सको फ्रिक्वेन्सीबाट अलग रहन “पारस्परिक सहमति” को सम्बन्धमा विश्वव्यापी रूपमा लागू गर्ने राम्रो अवधारणा हो। जे भए पनि, यो पूर्ण रूपमा पति र उनकी पत्नी बीचमा सहमत हुनुपर्दछ। न त जीवनसाथीलाई कुनै जबरजस्ती गर्नुपर्दछ वा जबरजस्ती गर्नु नै हुँदैन किनकि जुन बेला उनी त्यस काम गर्न सहज छैनन्। यदि मुख मैथुनको क्रियाकलाप विवाह को सीमा मा र आपसी सहमति को भावना मा गरीएको छ भने, यो एक पाप हो भनेर घोषणा गर्न बाइबलीय तथ्य छैन।
सारांशमा भन्नुपर्दा विवाह अघि मुख मैथुन बिल्कुल पाप हो। यो अनैतिक छ। यो कुनै पनि हिसाबले अविवाहित जोडीहरूको लागि मुख मैथुन जस्ता यौन सम्बन्धको क्रियाकलाप अबाइबलीय हो। विवाह को सीमितता भित्र भने, जबसम्म आपसी सहमति छ मुख मैथुन पापबाट मुक्त हुन्छ।
*जबकि मुख मैथुन यौन संक्रमित रोगहरूको सम्बन्धमा यौन संभोग भन्दा सुरक्षित छ, यो पक्कै पनि सुरक्षित छैन। हर्पेस, एचआईभी / एड्स, र अन्य एसटीडीहरू मुख मैथुनको माध्यमबाट पनि सार्न सकिन्छ।
जागृतिको लागि आत्मिक युद्ध
छनौट तपाइकै हातमा छ।